SPORTS MYANMAR - Page 885 of 944 -
ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတဲ့ ကင်နီ ၊ ဘောလုံးရာသီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ စကော့လိဂ်တွေနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
April 16, 2020 - by Editor
လာဇီယို အသင်း က တော့ စီးရီးအေ ကို လက်ရှိ အနေ အထား အတိုင်း ရပ်နားကာ ယူဗင်တပ် ကို ဖလား ပေးအပ် လိုက်သည် ဖြစ်စေ ၊ ရာသီတစ်ခုလုံး ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ယမန်နှစ်က အတိုင်း သတ်မှတ်သည် ဖြစ်စေ လက်ခံ သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ …
စီရော်နယ်ဒိုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပေါလ်စခိုးရဲ့ အရည်အသွေး တစ်ခုကို ပြောပြလိုက်တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရေ့စ်
April 15, 2020 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟောင်း အိုဝင်ဟားဂရေ့စ်က ပေါလ်စခို်းဟာ ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ထက် ဘောလုံး ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူဟောင်းဟာ မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ အတွင်း စခိုးလ် ၊ ရော်နယ်ဒို တို့နဲ့ တွဲဖက် ကစား …
ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အနေအထား အပေါ် ပထမဆုံး အကြိမ် ထင်ကြေး ပေးလိုက်တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ တုန်းက စပို့တင်း လစ္စဘွန်း အသင်း မှ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား သစ် ဖြစ်သူ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် က ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာ ရဲ့ အရည်အသွေး အပေါ် ယုံကြည်မှု …
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့် တစ်ဦးဟာ သူ့ကို အံ့ဩသင့်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ဒေးဗစ်လူးဝဇ်
ဘရာဇီး အသင်းရဲ့ ဝါရင့် နောက်ခံလူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်လူးဝဇ် က မာတီနယ်လီ ဟာ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ရှိရုံတင်မက စိတ်ဓတ်ပိုင်းပါ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူး သွားခဲ့ပြီး ထိပ်တန်း အဆင့်ကို ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ မာတီနယ်လီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ …
ရေးပါလာ ရွေးချယ် ပေးလိုက်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ခဲ့သလဲ
ဂန်းနား ဂန္တဝင် ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာ ဟာ သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းမှာ အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ အသင်း ခေါင်းဆောင် တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်း ကို ထည့်သွင်း ရွေးချယ် လိုက်ပါတယ် ။ အူဘာမီယန်း ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ပွဲ ၉၅ ကစားပေးထားပြီး …
ရွန်းနီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ဟာ သူ့ရဲ့ ကပ္ပတိန် ရာထူး အပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဂန္ထဝင် နောက်ခံလူ ဂယ်ရီ နဗီးလ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကပ္ပတိန် လက်ပတ် ကို ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ဆင်မြန်း ဝတ်ဆင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ကစား သမား ဘဝ နောက်ပိုင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ ရုန်းကန် လာခဲ့ရတာ ကြောင့် …
ကစားသမား ဘဝ ဘယ်အသင်းဆီကို ပြောင်းဖို့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့် တစ်ခုကို ဖွင့်ဟ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက်ပဲ တစ်သက်လုံး ကစားပေး ခဲ့တဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရိုင်ယန် ဂစ်က 2003 ခုနှစ် တုန်းက ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း မှ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ခြင်းက သူ့ကို ယူနိုက်တက် မှာပဲ ဆက်လက် …
April 15, 2020 April 15, 2020 - by Editor
မန်ချက်စတာ ၂ သင်း အပါအဝင် ဥရောပ ထိပ်သီးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အူပါမီကာနို ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ?
ဂျာမန် ကလပ် RB လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းမှာ ကစား နေတဲ့ ပြင်သစ် နောက်ခံ ကစား သမားလေး ဒါယွန် အူပါမီကာနို ဟာ ဥရောပ ထိပ်သီး အသင်းတွေ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ကို ရရှိ နေပါတယ် ။ အသက် ၂၀ ကျော်သာ ရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေး ဟာ မန်ယူနိုက်တက် …
၂၀၁၄ – ၁၅ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆု ကို ဆွတ်ခူးစေခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို ရဲ့ Mind game တခု အကြောင်း ပြန်လည် ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ #တယ်ရီ
၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ဒုတိယ တကြိမ် ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ လူမျိုး နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဟာ သူ့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း နာမည်ကြီး ကစားသမား တချို့ ကို ချယ်လ်ဆီး အသင်း ထံ ခေါ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သလို ၊ အောင်မြင်မှု တချို့ …
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဖာဒီနန် ၊ ရာဖေး တို့နဲ့အမြင်ကွဲပြားခဲ့တဲ့ အဲဗာတန် နောက်ခံလူ
အဲဗာတန် နောက်ခံလူဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျိုးဆက်ယိုဘိုက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မြန် ရောဂါကြောင့် ဒီရာသီ ပြီးဆုံးနိုင်သည် ဖြစ်စေ မပြီးဆုံးသည် ဖြစ်စေ လီဗာပူးဟာ ၂၀၁၉-၂၀ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုနဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် လိဂ်ပွဲစဉ်တွေ ရပ်နားထားခြင်း မပြုမီ နှစ် ၃၀ အတွင်း ပထမဦးဆုံး အမှတ်ပေးဖလား …
လီဗာပူးတို့ ဗက်နာကို ခေါ်ယူသွားဖို့ မရှိတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကို ချပြလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
ဂျေမီကာရေဂါ က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မြန် ရောဂါရဲ့ ဘဏ္ဍရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိုးနှက်မှုကြောင့် လီဗာပူး အနေနဲ့ ရက်ဘူးလိုက်ပ်ဇစ် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး တီမိုဗက်နာ ကို ခေါ်ယူ သွားဖို့ မရှိနိုင်လောက်ဘူးလို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ဗက်နာဟာ လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းနဲ့ အတူ ထွန်းတောက်လျက် ရှိနေတာကြောင့် ဥရောပ ထိပ်တန်း အသင်းကြီး တွေရဲ့ပစ်မှတ် …
Previous 1 … 884 885 886 … 944 Next